Wednesday March 18, 2020 - 19:33:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa sare usii kacaya dadka udhimanaya iyo kuwa labuko cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dadka u dhintay Carona ay gaareen 8231 qof kuwaas oo ku dhintay daafaha caalamka waana tiradii ugu badneed ee ladiiwaan geliyo tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay wadanka Shiinaha Sedax bilood ka hor.
Dadka lajiifa cudurkan ayaa gaaraya 204-kun oo qof, dowladda Shiinaha ayaa war ay maanta soo saartay ku sheegtay in 11 qof ay Caronka ugu dhinteen magaalada Wuhan halka uu soo ritay dad gaaraya 3237 qof.
Wadanka Talyaaniga dad cudurkan dilaaga ah udhintay waxay gaarayaan 2503 qof halka ay lajiifaan inkabadan sodon kun oo qof.
Wasaaradda caafimaadka dowladda Shiicada Iiraan ayaa galabta sheegtay in dadka u dhintay Carona ay ka badanyihiin 1135 qof waxayna ka codsaday caalamka in lalasoo gaaro kaalmo dhanka caafimaadka ah.
Carona Virus ayaa ku faafay in kabadan 166 dal oo caalamka katirsan waxaana socda dadaallo xooggan oo lagu doonayo in lagu xakameeyo halista cudurkaan, dowladaha Mareykanka,Shiinaha iyo Faransiiska ayaa sheegay in ay bilaabeen tijaabada daawo awood u leh in ay disho Viruska Carona.